Qoodi Ameerikaan Duula Farra Shorokeessummaa Afriikaa Keessaa Qabdu Gaaffii Kaasiise
Humnootiin addaa US afur kanneen baatii darbe Niger keessatti ajjeefamanii Ameerikaan qooda isheen leeillistummaa hookkaraan guutame kan biyyoota naannoo Afriikaa keessaa irratti duuluu qabdu ilaalchisee gaaffii kaasisee jira.
Haleellaa baatii Onkoloolessaa sanaan yoo xiqqaate loltoonni Nigeria afur kan ajjeefaman yoo ta’u miseensonni mana maree akka ejdhanitti duula US Niger keessatti geggeessitu quba qabu garuu kanneen akka garee Repablikaanii irraa ta’an Senator kutaa South Caroliana Lindey Graham fi demikraatichi kutaa NY senator Chuck Schumer loltoonni US Niger keessa jiraachuu qabu hin qabnu jedhan.
Jiddu seeninsa USn Ameerikaan loltoota 800 ol gamasii kan qabdu ta’uu angawoonni Pentagon beeksisaniiru. Maadheen xayyaara nam maleeyyii lama illee biyyattii keessa jiraachuun beekamee jira.
Niger fi Burkina Faso-n US mootummoonni naannoo shororkeessummaa irratti duula geggeessan keessumaa gamtaa humnootii wal ta’an haaraa ka naannoo Sanaa maallaqaan deggersa gootu akka dabaltu gaafataniiru.